Akụkọ - Gini bu ihe n’emeghi ihe n’uzo?
Gịnị bụ mkpọtụ valvụ?
Mgbe ụgbọala ahụ malitesịrị, njin ahụ na-eme “pịa” nke yiri ụda yiri mgbaaka ígwè, nke na-eme n’ike n’iru ka ọsọ injin ahụ na-amụba. N'okpuru ọnọdụ nkịtị, injin ahụ agaghị eme ụdị mkpọtụ a ogologo oge. A na-eme ọtụtụ mkpọtụ oge dị mkpirikpi mgbe mmalite oyi wee jiri nwayọ laa. Nke a bụ mkpọtụ valvụ ahụ.
Kedu ihe kpatara valvụ ahụ na-akụ?
Isi ihe mere valvụ ji akụ bụ nwechapụ kere n'etiti valvụ engine usoro, ihe ka ọtụtụ n'ime ha bụ n'ihi akụkụ ndị na-eyi ma ọ bụ mmezigharị mmezi, dị ka camshafts, ogwe aka, na nkedo hydraulic.
Imirikiti injin ndị ahụ na-eji jacks hydraulic, bụ nke a na-ejikarị emezi ihe na-akpaghị aka site na njedebe nke usoro valve. A na-achọpụta mmezi akpaka nke ọkpọ hydraulic site na nrụgide mmanụ. Mgbe akụkụ ndị ahụ na-eyi gabiga ókè ma gafee njedebe nke mmezi akpaka, mkpọtụ valvụ ga-eme. Ndaba nke kọlụm hydraulic jack na ọdịda nke ọrụ ndozi akpaka nwekwara ike ime ka valvụ ahụ daa.
Valvehapụ valvụ ókè, na mgbakwunye na mkpọtụ mgbe ịmalite (nke doro anya mgbe ụgbọ ala ahụ dị oyi), enwere nsogbu ndị ọzọ. Dị ka: erughị eru valvụ, nri na-ezughị ezu, iyuzucha ezughị ezu, belata ike engine, na oriri mmanụ.
Dika ugbo ala obula di iche, ihe ndi ozo choro di iche. N'ozuzu, nkwụsị nkịtị nke valvụ oriri dị n'etiti wires 15-20, na nkedo nkịtị nke kpochapu ọkụ dị n'etiti wires 25-35.
Kedu njikọ dị n'etiti mkpọtụ valvụ na mmanụ injin?
Ebe ọ bụ na nrụrụ mmanụ na-ahụta ọrụ mmezi akpaka nke ikuku hydraulic, ụda valvụ nwere mmekọrịta kpọmkwem na mmanụ. N’ezie, ihe ga-eme bụ na injin ahụ eyighị uwe.
1. Obere nsogbu mmanu ma obu oke mmanu
Obere nrụgide mmanụ, mmanu na-erughị eru nke ụlọ valvụ ahụ; ma ọ bụ mmanụ na-ezughị ezu, na ọdịiche dị na nkedo hydraulic mgbe ikuku na-abanye na ntinye mmanụ, ga-eme mkpọtụ valvụ.
2. Ikuku na-abanye na ntinye mmanụ n'oge mmezi
Ọtụtụ ndị nwere ụdị ahụmahụ a. Ha ka rụchara mmezi ahụ, ma enwere ụda olu dị mkpụmkpụ mgbe ọkụ ahụ dị n'echi ya. N’ezie, ọnọdụ a adịtụghị mma, n’ihi na mgbe a na-esi mmanụ n’ite mmanụ, mmanụ na-esi na mmanụ adịghị, ikuku nwekwara ike ịbanye n’ọdụ mmanụ wee mee mkpọtụ valvụ. Mgbe oge ọrụ gasịrị, a ga-ahapụ ikuku na mkpọtụ valvụ ahụ ga-apụ n'anya.
3. More carbon nkwụnye ego na engine
Mgbe ejirila injin ahụ rụọ ọrụ nwa oge, carbon carbon ga-eme n'ime. Mgbe carbon na-agbakọ na ọkwa ụfọdụ, enwere ike igbochi ụzọ mmanụ, na-eme ka ọrụ ngbanwe ọdịiche na-akpaghị aka nke nkedo hydraulic daa ma na-eme mkpọtụ valvụ.
Olee otú izere valvụ mkpọtụ?
Izere ịgbanye ụda valvụ dị nnọọ mfe. Onye nwe ụgbọ ala ahụ kwesịrị ịkwado oge dị ka ihe onye nrụpụta chọrọ si gbochie uwe injin, nke nwere ike belata ọnọdụ nke ọnọdụ a n'ụzọ dị irè. Ọ dịkwa ezigbo mkpa ịhọrọ mmanụ njin nke kwesịrị ekwesị maka ọkwa engine na viscosity nke ụgbọ ala gị, ma ghara ịgbanye isi mmanụ na mmanụ dị elu na nke viscosity na-enweghị isi.
Post oge: Jan-28-2021